Sarimihetsika tsara indrindra hijerena horonantsary 50 tsara indrindra (2020) - Fialam-Boly
Imbetsaka isika no miatrika olana madinidinika izay mipoitra foana rehefa ny mijery sarimihetsika amin'ny Amazon Prime Video na ny serivisy mivantana. Ny olana lehibe dia ny fandraisana fanapahan-kevitra toa izay hojerena fa sarotra loatra amin'ny fanangonana sarimihetsika azo isafidianana.
Misy sarimihetsika mahafinaritra an'arivony. Ny fijerena ireo sarimihetsika ireo amin'ny Amazon Prime Video sy ny fiezahana manapa-kevitra hoe iza no tianao hojerena dia mety ho asa sarotra tokoa ho an'iza na iza.
Azonay atao ny manandrana ny tsara indrindra vitanao mba hanampiana anao handray fanapahan-kevitra tsara momba izay azonao jerena amin'ny fanomezana anao lisitr'ireo sarimihetsika mandeha ankehitriny. Ireo sarimihetsika dia mandeha maimaim-poana amin'ny Amazon miaraka amin'ny mpikambana Prime .
Lisitry ny sarimihetsika tsara jerena amin'ny horonan-tsary voalohany:
1. Ilay lehilahy mainty hoditra farany tany San Francisco (2019)
Manoloana ny famindran-toerana avy ao an-trano namboarin'ny raibeny vokatry ny fanamafisana tao amin'ny manodidina azy tao San Francisco, dia nanangana iraka i Jimmie sy ny sakaizany, Mort, haka ny trano alohan'ny hanovana azy. Ny tolona ataon'izy ireo dia mizaha toetra ny fisakaizan'izy ireo ary manery azy ireo hanontany hoe avy aiza izy ireo.
2. Ady amin'ny fianakaviako (2019)
Sarimihetsika mampihomehy izay mifototra amin'ny tantaran'ny mpikomy WWE Paige ihany koa. Ny miady amin'ny horonantsarin'ny fianakaviako dia mampiseho ny tantaran'ny fianakaviana iray mitolona amin'ny fiainana. Izany dia nosoratan'i Stephen Merchant. Ity sarimihetsika ity dia ahitana an'i Florence Pugh ary mpilalao mahery vaika koa izay ahitana an'i Dwayne The Rock Johnson, Lena Headey, Vince Vaughn, ary ny sasany hafa. Ao amin'ny sarimihetsika, Pugh sy ny anadahiny (Jack Lowden) dia nanandrana ny WWE ary, raha ny iray tamin'izy ireo ihany no voatery nanatrika ny tontolon'ny tolona matihanina irery.
3. Ny Tatitra (2019)
Mampientam-po izay mifandraika amin'ny politika, fanenjehana fiara ary fikasana hamono olona noho ny fihenjanana tsy ampoizina amin'ny alàlan'ny antontan-taratasy, ny The Report dia mampiseho ny mpiasa senatasy Daniel Jones (Adam Driver), izay nofidian'i Sen. Dianne Feinstein (Annette Bening) ho manadihady momba ny famotehana tanteraka ny fandraisam-peo nataon'ny CIA tamin'ny taona 2005. Nandritra ny taona maro, Jones sy ny ekipany dia nandrava takelaka an-tapitrisany tamina antontan-taratasy voadidy amin'ny redaction, nandritra ny fotoana nisisihan'izy ireo ny ezaky ny tompon'andraikitra governemanta hamongorana ny ezak'izy ireo. Mampientam-po ny tatitra.
4. Fiainana mahafinaritra (1946)
Sarimihetsika Krismasy mahazatra misy fampisehoana malaza an'i James Stewart, Wonderful Life manaraka an'i George Bailey (Stewart), izay banky ao an-tanànan'i Bedford Falls ary miomana ny hanary ny tenany eny ambony tetezana atsy ho atsy. Tampoka teo dia nisy anjely iray nantsoina hoe Clarence (Henry Travers) niseho teo hamonjy an'i George, ary avy eo dia nentiny nanao dia lavitra nandritra ny fotoana nahafaly sy manan-danja indrindra teo amin'ny fiainan'i George izy, izay mampiseho azy ny zavatra tsara rehetra nataony ho an'ny olon-kafa. .
Notarihin'i Kenneth Lonergan, dia miorina ao an-tanànan'i Manchester, tanàna iray i Lee Chandler (Casey Affleck) izay tsy te hiverina intsony. Chandler dia miasa amina mpiompy trano any Quincy, manalavitra ireo fifandraisana misy eo amin'ny fiainany taloha. Mampody azy mody ny loza; Ny rahalahiny, Joe (Kyle Chandler), dia maty tampoka, ary namela zanakalahy tanora iray ihany koa, Patrick (Lucas Hedges) dia nangataka an'i Lee hikarakara azy.
Ao anatin'ny Llewyn Davis dia mampiseho an'i Davis rehefa manandrana manao ny asany mozika amin'ny làlana taorian'ny famonoan-tena nataon'ny mpiara-miasa aminy mozika. Ny volany koa tsy dia tsara loatra, ary koa ilay olon-tiany taloha, Jean (Carey Mulligan), bevohoka zaza mety ho azy, tsy te-hanana na inona na inona aminy.
Nataon'ny talen'ny Koreana Park Chan-wook izay talen'ny Oldboy nahazo loka ihany koa. Ny sarimihetsika Handmaiden dia sarimihetsika mahery vaika izay napetraka tany am-piandohan'ny taona 1900 nandritra ny fibodoan'ny Japoney an'i Korea. Mampiseho vehivavy roa ity sarimihetsika ity, tovovavy japoney iray amin'ny fananana mitokana ny iray, ary ny iray kosa vehivavy Koreana nokaramaina ho ankizivaviny vaovao. Tsy fantatr'ilay voalohany fa miray tsikombakomba amin'ny lehilahy iray ity farany hanambaka ny vehivavy amin'ny lovany
8. Tsy teto mihitsy ianao (2017)
Joaquin Phoenix dia kintana ho toy ny veteran traumatized izay mampiasa ny trauma ho azy amin'ny fihazana tovovavy izay tsy mahita fivelomana. Saingy, rehefa nanomboka nahatratra azy ny nofinofiny ary nanohy niditra tao an-dohany izy, nanomboka namoaka tsikombakomba iray izay mandrahona ny hamotika na hamonjy azy, arakaraka ny lalana alehany.
Mampiseho ny tantaran'ny vehivavy 58 taona i Gloria izay tsy maniry zavatra hafa eto amin'izao tontolo izao afa-tsy ny hahatsapa ho tanora indray. Ny diany hitadiavana fahasambarana dia voamarin'ny lehilahy sendra sasany mandra-pahatongany mihaona sy mianjera amin'i Rodolfo. Tsy ela i Gloria dia nahita ny finiavana hanaiky ny taonany marina ary hitombo ho vehivavy.
Taorian'ny fahafatesan'ny reniny, Annie Graham (Toni Collette) dia nitolona mafy hihazona ny fihetseham-pony ary mitazona filaminana milamina ao an-tranony. Taorian'ny loza iray hafa nahazo ny fianakaviany, anefa, dia tapaka tanteraka i Annie ary zara raha azony natao ny mitazona ny tenany, ary vao mainka niharatsy ny toe-pahasalamany satria nisy trangan-javatra hafahafa teo amin'ny fianakaviany.
Fantatra amin'ny maha sarimihetsika fisaraham-bazana opera izay tarihin'i Ari Aster. Midsommar dia manaporofo fa tena nitovizana tamin'ny zavatra nahafantarana azy. Saingy, amin'ny fomba mampiahiahy kokoa. Izy io dia mampiseho mpivady amerikana manana olana ara-pifandraisana lehibe izay miara-dia amin'ny namany mankamin'ny fetibe afovoany. Vao mainka manelingelina sy tsy milamina kokoa izany.
Taorian'ny fahaverezan'ny asany tokana dia miezaka mafy ny mpiasa amin'ny fanamboarana Jimmy Logan (Channing Tatum) hamadika ny hareny, ary fantany tsara ny fomba hanaovana izany. Rehefa avy niasa tao amin'ny Charlotte Motor Speedway izy dia fantany daholo ny momba ny rafitra fantsom-pandrefesana pneumatika izay mamindra vola eo ambanin'ny lalana. Vetivety dia nanakarama an'i Clyde (Adam Driver) sy ny rahavaviny Mellie (Riley Keough) i Jim, ary mpikarama an'ady Joe Bang (Daniel Craig) ho an'ny heist. Saingy, ny fanovana ny fandaharam-potoana fananganana dia nanery azy ireo handeha maraina, tamin'ny andro hazakazaky Coca Cola.
13. Ady mangatsiaka (2018)
Ny Cold War dia mampiseho ny fiainan'i Wiktor (Tomasz Kot) sy Zula (Joanna Kulig), izay talen'ny mozika sy mpihira tsirairay avy, nifankahita sy nifankatia tany Polonina izy ireo taorian'ny nifaranan'ny Ady Lehibe Faharoa. Vetivety dia miampita sisin-tany izy roa, ary samy miala amin'ny fiainany avy. Cold War dia sarimihetsika tsara jerena.
Ny sarimihetsika dia manomboka amin'i Kumail izay sahirana amin'ny fananganana asa hatsikana mijoro eo am-pitrandrahana ny fiaviany Pakistaney ho an'ilay fitaovana. Rehefa avy nihaona tamin'ny tovovavy iray antsoina hoe Emily (Zoe Kazan) izy dia vetivety dia nivadika ho iray alina monja izy io, ary taty aoriana dia lasa mpinamana izy roa, ary nanomboka nisy olana maromaro. Ny ray aman-drenin'i Kumail dia maniry azy hipetraka amin'ny tovovavy pakistaney izay mitarika ny mpivady hisaraka. Vetivety dia misy komity miala an'i Emily. Raha mitsidika an'i Emily any amin'ny hopitaly i Kumail, mihaona amin'ny ray aman-dreniny izy, mianatra bebe kokoa momba azy ireo sy i Emily.
15. Laharana (2011)
Hevitra Wild West izy io, miaraka amina tsipika komedika marobe. Rango Depp's Rango dia ao an-tanànan'i Dirt ary mitana ny andraikitry ny sheriff amin'ny fikarohana rano tsy hita ao an-tanàna. Gore Verbinski no mitarika izany.
16. Ny ady tsy hita (2012)
Izy io dia momba ny trangana herisetra ara-nofo mahery vaika ao amin'ny tafika amerikana. Ny Ady tsy hita maso dia mampiseho ny resadresaka nifanaovana tamin'ireo veterans an'ny sampana samihafa ao amin'ny tafika amerikana, izay mahatadidy ireo zava-nitranga manodidina ny fanafihana ara-nofo. Ny tantaran'izy ireo dia maneho ny tsy fisian'ny fahamarinana sy ny tsy fisian'ny fikarakaran'ireo sisa velona. Nangataka ny fanovana ny fomba nitondran'ny tafika ny herisetra ara-nofo sy ireo tafavoaka velona ireo.
Ny Lighthouse dia tarihin'i Robert Eggers, izy no sarimihetsika tsy mahazatra indrindra amin'ny taona 2019. Ity sarimihetsika ity dia mampiseho ny The Lighthouse izay nitranga tamin'ny taonjato faha-19 tany ho any. Irery sy tafahitsoka ao amin'ny nosy, Winslow sy Wake dia miady ary ny fiandohan'ny hadalana. Mahagaga ny fampisehoana nataon'i Pattinson sy Dafoe.
Awkwafina dia mitana ny andraikitr'i Billi Wang, izay mpanoratra ary tsy ela dia fantany fa ny renibeny, Nai Nai (Zhao Shu-zhen), dia ho faty tsy ho ela noho ny homamiadan'ny havokavoka any Shina. Mba haharatsy kokoa aza ny raharaha, ny ray aman-drenin'i Billi, Haiyan Wang (Tzi Ma) sy Lu Jian (Diana Lin), ary koa ny sisa amin'ny fianakaviana, dia nanakana an'i Billi tsy hampandre an'i Nai Nai fa andro vitsy sisa hiainany. Noho izany, ny fampanantenan'ny fianakaviany dia mavesatra amin'i Billi, saingy ny fifandraisany amin'ilay renibeny malalany dia tena tsara tarehy sy mampihetsi-po.
19. Ny mpanjakavavy afrikanina (1951)
Ny iray amin'ireo faritra tsara indrindra amin'ny Amazon Prime dia ny famelana ny mpampiasa azy amin'ny sokajin-taona rehetra hijery sarimihetsika nivoaka am-polony taona maro talohan'ny nahaterahany akory. Ny Mpanjakavavy Afrikana dia sarimihetsika nataon'ny talen'ny John Huston. Mampiseho ny fiainana tamin'ny Ady Lehibe I ny tantara, tamin'ny naha misiônera azy antsoina hoe Rose Sayer (Hepburn) ary kapitenin'ny lakana amoron-drano, Charlie Allnut (Bogart). Ilay sarimihetsika Mpanjakavavy Afrikanina dia mitondra an'i Charlie sy Rose amin'ny loza lehibe.
Ity sarimihetsika ity dia miresaka momba ny mpanoratra tantara an-tsarimihetsika malaza iray izay maty tsy nampoizina indray alina taorian'ny fivorian'ny mpianakavy izay mampiahiahy ny polisy ny polisy rehetra. I Daniel Craig dia mitana ny andraikitry ny mpitsikilo Benoit Blanc, izay manampy amin'ny famotopotorana ny fahafatesana ary mamela anao haminavina hoe iza no tompon'antoka tamin'io asa ratsy io.
Ity mpampientanentana sci-fi ity dia mampiseho mpikirakira switchboard tanora ary koa radio DJ izay mahita fahita matetika amin'ny feo miafina izay nanangana andiana zavatra hita izay nitarika azy ireo tsy ho fantatra.
Rocketman dia manipy an'i Taron Egerton ho mpilalao ary mampiseho ny fivoaran'i John avy amin'ny lehilahy kely iray ka hatrany amin'ny superstar iraisam-pirenena. Ahitana an'i Jamie Bell ho mpanoratra tononkira sy mpiara-manoratra amin'i Bernie Taupin ihany koa i Jamie Bell.
Ny sarimihetsika nataon'i Drew Goddard The Cabin the Woods dia manana tantara tsy manam-paharoa izay mampiseho andiana tanora ampijalian'ny hery ratsy fanahy raha mbola mijanona ao amin'ny trano kely lavitra any amin'ny lalana vaovao tanteraka. Goddard sy ilay mpiara-manoratra Joss Whedon dia nilalao sy nanolana ny fivoriamben'ilay karazana tamin'ny fomba tsy hitan'ny olona ho avy, ary ny vokatra farany dia sarimihetsika mahatsikaiky satria mampatahotra, ary misy zavatra miafina maro izay mitaky fahitana marobe. Raha mbola tsy nahita ny sarimihetsika The Cabin in the Woods ianao, dia ho an'ny tsara indrindra no fantatrao araka izay kely indrindra momba ity sarimihetsika ity. Saingy, raha efa nahita an'io ianao dia misy ny vintana mety hijerena azy hatrany hatrany hatrany.
Mampiseho vehivavy telo mandrafitra vehivavy miaraka amina fahaiza-manao matanjaka ao amin'ity sci-fi thriller ity izay mampiharihary ny fanavakavaham-bolon-koditra sy ny fifandimbiasan'ny tantara manoloana ny fototr'ilay tantara mampihoron-koditra momba ny vehivavy iray izay enjehin'ny hery ratsy noho ny fahefana sasany.
Hita eto fa misy rahalahy roa avy any Boston mahita ny tenany fa manana iraka lehibe hamongorana ny vahoaka romotra Rosiana amin'ity sary mihetsika ity izay nalaza be teo amin'ny tontolon'ny fialamboly an-trano na dia teo aza ny andiana olana. Sean Patrick Flanery sy Norman Reedus dia milalao ireo rahalahin'i MacManus, izay ny vintana dia nanova azy ireo ho mahery fo eo an-toerana ary mametraka azy ireo amin'ny lalan'ny fifandonana miaraka amin'ny maso ivoakan'ny FBI eccentric nolalaovin'i Willem Dafoe.
Mampiseho ireo mpilalao amin'ny ligin'ny rugby quad. Ny horonantsary dia manaraka ekipa maro izay manandrana hifaninana amin'ny Lalao Paralympic any Athens, Gresy, eo am-panehoana ny fiainan'ny mpilalao, inona no nahatonga azy ireo tamin'ny fanatanjahantena, ary ny dikan'izany fanatanjahan-tena izany amin'izy ireo.
Tamin'ny taona 2012 lasa teo, Marvel Studios dia nanangona ny kintana rehetra tamin'ny sarimihetsika superhero irery ho an'ny ekipa goavambe izay fantatra amin'ny anarana hoe Avengers. Ny Avengers dia mpanakalo lalao ho an'ny karazana mahery fo iray manontolo ary azo antoka fa tian'ny mpijery rehetra izy io.
Mampiseho ny fiainan'ny mpilalao sarimihetsika Otis Lort rehefa niarina tamin'ny fahombiazan'ny tanora kintana Hollywood manimba tena izy taoriana kelin'izay nitolona. Ny rainy mpisetrasetra sy mpisotro toaka dia manaporofo fa tsy ho vita intsony satria potika mandritra ny folo taona ny fifandraisan'izy ireo mampidi-doza.
Ny horonantsary dia miantomboka amin'ny maso miafina Ethan Hunt (Tom Cruise), izay eny amin'ny làlan'ny Impossible Missions Force, manandrana miaro ireo fotony plutonium mangalatra. Rehefa tsy mandeha ny iraka dia miafara amin'ny tànan'ny vondrona mpampihorohoro ny ati-doha. Fallout no sary mihetsika be mpanaraka.
30. Fiainana avo (2019)
High Life dia horonantsary mampihoron-koditra mahatsiravina sci-fi. Juliette Binoche dia mitana ny toeran'ny Dr. Dibs, izay mpanara-maso ny iraka an-habakabaka izay mandefa olon-dratsy hanandrana mamoaka angovo avy amin'ny lavaka mainty. Eny an-dalana dia manao andrana ara-nofo amin'ireo mpanao heloka bevava izay mitarika ny fahafatesan'izy ireo koa i Dr. Dibs. Taty aoriana, ny mpamono olona Monte (Robert Pattinson) dia avela irery miaraka amin'ny zanany vavy ary manandrana miaina izy ireo satria eo an-tokon'ny fahafatesana izy ireo.
31. Kilasy fahavalo (2018)
Ny horonantsary kilasy fahavalo dia ivon-toerana manodidina an'i Kayla, 13 taona, rehefa namakivaky ny herinandro farany tamin'ny fahazazany. Ny Kilasy fahavalo dia sary mihetsika momba ny sekoly ambaratonga faharoa izay mampiseho ny tena mpianatra antonony, izay mampihomehy sy mahaliana kokoa ny mijery azy.
Miorina amin'ny boky 2009 manana anarana mitovy amin'izany, The Lost City of Z dia mampiseho ny tena tantaran'ilay mpikaroka anglisy Percy Fawcett (Charlie Hunnam), izay niditra tao Amazon tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20. Nahita tsy nampoizina ny porofo momba ny sivilizasiona tsy fantatra taloha izay nisy tao amin'ilay faritra izy nandritra ny diany. Tsy ela dia niverina tany anaty ala izy ary tapa-kevitra ny hanaporofo ny heviny ary hahita ny Lost City of Z.
Tamin'ny taona 1984 tany ho any dia niara-niangona tamin'ny tarika antsoina hoe Talking Heads for Stop Making Sense ny talen'ny Jonathan Demme, izay fantatra ho iray amin'ireo sarimihetsika fampisehoana mahatalanjona indrindra amin'ny fotoana rehetra. Demme mora naka sary ny sarimihetsika tamin'ny fampisehoana mivantana efatra tao amin'ny Pantages Theatre any Los Angeles ary nanampy tamin'ny fampisehoana ny fiainany ny Talking Heads.
34. Ahoana no hampiofana ny dragona (2010)
Tsy ny horonantsary mihetsika rehetra dia kilasika eo noho eo, fa ny fomba fampiofanana ny dragona dia miaina mifanaraka amin'ny karazanyo ary tsy mihoatra ny antenainao ihany koa. Miorina amin'ny boky izay manana anarana mitovy io. Ny fomba fampiofanana ny dragona dia mampiseho ny fiainan'ny zazalahy kely Viking antsoina hoe Hiccup (Jay Baruchel). Tsapany fa ny dragona dia afaka miara-miasa amin'ny olombelona fa tsy ny fahavalony mahafaty.
Amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fanandramana, ary ny fahatokisan-tena maromaro, mampiofana i Hiccup ary mifamatotra amin'ny dragona mainty kely antsoina hoe Toothless, izay manova ny tontolony mandrakizay. Ny sary mihetsika mahavariana dia mbola mitondra ny fofonaintsika folo taona taorian'ny nivoahan'ity horonantsary ity. Izy io dia niteraka zana-trondro, saingy io no sarimihetsika tsara indrindra amin'ny trilogy.
Blow the Man Down dia sarimihetsika hatsikana maizina izay tonga tao amin'ny Amazon Prime. Morgan Saylor sy Sophie Lowe dia hita fa rahavavy Mary Beth sy Priscilla Connolly. Rehefa namono lehilahy iray nanandrana nanisy ratsy azy i Mary Beth, dia nino i Priscilla fa matevina noho ny rano ny ra ary avy eo manampy ny rahavaviny izy hanarona ireo porofo sisa tavela. Saingy, ho an'ireo rahavavy Connolly, ny zava-miafina dia sarotra hitazomana ao amin'ny tanàna kely iray, tsy fantatr'izy ireo hoe iza no azony itokisana.
36. Fanavaozana voalohany (2017)
Ethan Hawke dia mitana ny andraikitr'i Ernst Toller, izay pasitera ary tsy mijaly amin'ny krizy finoana fotsiny. Mijaly tokoa izy rehetra. Rehefa nisy vehivavy bevohoka antsoina hoe Mary Mensana (Amanda Seyfried) niangavy azy hanoro hevitra ny vadiny, Michael (Philip Ettinger), tsy ela dia hitan'ny pasitera ny tenany ary nanaiky ny fomba fijerin'i Michael an'izao tontolo izao.
Adam Driver dia kintana ho Paterson, lehilahy miasa toy ny mpamily fiara mpitatitra. Fa raha ny tena izy dia poeta i Paterson izay mbola tsy nianatra nanaiky tanteraka io lafiny io amin'ny tenany. Ny sarimihetsika manontolo dia mampiseho mandritra ny herinandro, ary eto amin'ity sarimihetsika ity dia ahitantsika ny fahazarana isan'andro Paterson miaraka amin'ny vadiny, Laura (Golshifteh Farahani). Vetivety dia vetivety dia tapaka ny lamina ary iharan-doza ny fiainany.
Casino Royale, voatendry hitady tanjona kendrena mandritra ny fifaninanana avo lenta ao amin'ny Casino Royale. Bond dia mamorona fifandraisana ara-batana sy ara-pihetseham-po amin'i Vesper Lynd (Eva Green), izay mpiara-miasa aminy amin'ny raharaha. Vesper no zazavavy tena tian'i Bond.
Ny Terminator dia mazava ho azy ny tantaran'i Sarah Connor an'i Linda Hamilton. Talohan'ny nahatongavan'i Sarah ho mpilalao sarimihetsika vehivavy mahery setra, dia fantatra ho tovovavy tsy misy lalana izay niasa ho mpandroso sakafo. Ny miaramila mpiady ho an'ny olombelona Kyle Reese (Michael Biehn) dia naverina niverina ara-potoana mba hanampy sy hiaro an'i Sarah amin'ny T-800 Model Terminator nolalaovan'i Arnold Schwarzenegger. Araka ny Kyle dia natao hiteraka an'i John Conner i Sarah, ilay lehilahy hitarika ny olombelona ho amin'ny fandresena amin'ny ho avy. Ary ny T-800 dia te hamono an'i Sarah. Amin'ny farany, nidina tamin'ny vehivavy iray sy ny masinina izy rehetra.
Ny trosa be dia be dia be dia be an'ny mpilalao fanta-daza izay ahitana an'i Tim Curry, Christopher Lloyd, Eileen Brennan, Madeline Kahn, Michael McKean, Martin Mull, ary Lesley Ann Warren. Tamin'ny alina nisy oram-baratra, Andriamatoa Brody dia namory vondron'olon-tsy fantatra ho any an-tranony satria mikasa ny hamono azy ireo izy. Saingy rehefa manomboka milahatra ny vatana, dia azony antoka fa misy mpamono olona eo amin'izy ireo.
Amin'ity horonantsary Crawl ity, nisy rivo-doza sokajy faha-5 namoaka tovovavy iray antsoina hoe Haley Keller (Kaya Scodelario) hamely an'ireo mpivarotra loza ireo rehefa miakatra ny rano ao amin'ny tranon'ny fianakaviany. Soa ihany, mpilomano mahery i Haley, ary nivoaka hamonjy ny rainy, Dave (Barry Pepper) izy. Saingy amin'ity indray mitoraka ity, ny gator dia manana ny tampony, ary manakana ny fivoahana rehetra ao an-trano izy ireo. Crawl dia mampiseho fihenjanana be dia be miaraka amin'ny antso akaiky ho an'i Haley, Dave, ary na ny alikan'i Haley, Sugar aza. Saingy ny fianakavian'i Keller dia manana ahiahy bebe kokoa noho ny amin'ireo mpitsangatsangana na ny tafio-drivotra fotsiny. Crawl dia maneho ara-bakiteny ny adin'ny fiainany, ary miteraka traikefa mampatahotra koa.
Ny Creed II dia ny tohin'ny Creed voalohany izay mitohy koa ny tohin'ny Rocky IV. Fahombiazana lehibe io tamin'ny fanomezana tantara mahery an'i Adonis Creed (Michael B. Jordan) sy Rocky Balboa (Sylvester Stallone) ary fihetseham-po sarotra be dia be hiasa. I Ivan Drago (Dolph Lundgren) dia niditra indray tamin'ny fiainan'izy ireo izay manohitra an'i Creed hiady amin'ny zanany lahy, Viktor Drago (Florian Munteanu).
Misy ny fifangaroan'ny fikorontanana ara-pihetseham-po sy ara-batana izay manasaraka an'i Creed sy Rocky alohan'ny hamerenany azy ireo indray. Ka noho izany, Creed II dia nanao asa mahatalanjona tamin'ny fanaovana ny formulaire hiasa indray.
43. Fihaonana akaiky amin'ny karazana fahatelo (1977)
Ity sarimihetsika ity dia tarihin'i Steven Spielberg. Close Encounters of the Third Kind dia mampiseho ny tantaran'ny mpiasa vozon'akanjo manga izay mijanona ao Indiana, izay niova ny fiainany taorian'ny fihaonana hafahafa tamina zavatra manidina tsy fantatra.
Ilay horonan-tsary dia mampivady an'i Spielberg amin'ilay mpilalao sarimihetsika Jaws - Richard Dreyfuss, izay mitana ny toeran'ny Roy Neary, ilay lehilahy nifanena taminy tamin'ny fihaonany tamin'ny UFO izay nisy fiatraikany ara-bakiteny teo amin'ny fifandraisany tamin'ny olona manodidina azy.
Notendrena ho talen'ny tsara indrindra ny talen'ny -Spielberg. Nandresy tamin'ny cinematography sy ny fanovana feo aza izy.
Ity sarimihetsika ity dia miresaka vondronà vehivavy manapa-kevitra ny tsy hanao firaisana amin'ny olon-tiany / mpiara-miasa aminy mandra-pifanarahan'izy ireo hifehezana ny herisetra ataon'ireo andian-jiolahimboto izay mitranga ao amin'ny faritra manodidina azy ireo any Chicago.
Ity dia fientanentanana sci-fi izay nosoratan'i Christopher Nolan. Mandroaka an'i Leonardo DiCaprio ho mpangalatra teknolojia avo lenta izay manana fahaizana mangalatra vaovao avy any an-tsain'ny sain'ny olona kendreny. Rehefa nokaramaina tamina karazana asa hafa izy, dia ny fampidirana eritreritra ao an-tsain'ny olona iray fa tsy ny halatra, dia mampiakatra ny tsatoka izany, ary avy eo dia mitarika azy amin'ny iraka mampidi-doza kokoa aza.
46. ​​Firenena tokana zaza (2019)
One Child Nation dia fanadihadiana fanadihadiana fandresena loka. Mandinika politika iray mety ho ren'ny olona maro izy ity, saingy vitsy ny any ivelany any Shina no tena nahatakatra an'io. Nanfu Wang sy Jialing Zhang miaraka amin'ireo mpanatontosa sarimihetsika teraka sinoa niverina tamin'ny politika 1980 izay tsy namela ny fianakaviana hanan-janaka mihoatra ny iray ary nampandoavina onitra mihitsy aza raha nanao izany ary hita ihany koa ny vokatr'izany teo amin'ireo fianakaviana.
Ity Amazon Original ity dia mampiseho ny fiainan'ny tovovavy mamirapiratra (McKenna Grace) manodidina ny 1977 any ambanivohitra Georgia izay manonofinofy ny fiainana eny amin'ny habakabaka. I Lucy Alibar no mpiara-manoratra ary i Dir & Bertie no talen'izy ireo. Rehefa nahazo fotoana hiaina ny nofinofiny i Grace taorian'ny fifaninanana nasionaly dia nanakarama tropy ragtag an'ny Skotisma Birdie afaka manampy azy ho tonga any izy.
48. Tsy izaho no Negro anao (2016)
Ny talen'ny Raoul Peck dia namorona ny I Am Not Your Negro, izay fanadihadiana amin'ny ankapobeny dia mandinika ny fomba fijerin'i Baldwin sy ny fomba fandehanan'izy ireo tsy amin'ny tabataba ihany fa any Amerika maoderina koa. Ny I Am Not Your Negro dia mamela ny mpijery azy hanana fahatsapana fa ny asan'i Baldwin dia mbola tsy vita, ary koa tsy zava-dehibe velively.
49. Fiaran-dalamby mankany Busan (2016)
Iza no mbola tsy naheno an'ity sarimihetsika ity? Ity sarimihetsika mampihoron-koditra Koreana Tatsimo ity dia mampiseho vondron'olona mpandeha izay niondrana an-dalamby haingam-pandeha avy any Seoul ka hatrany Busan satria ny fihanaky ny virus mahafaty dia nanomboka nanova ny olona ho zavaboary noana toy ny zombie ary ireo izay ao anaty fiaran-dalamby dia tsy maintsy mitady fomba. ho tafavoaka velona
Io dia toy ny sarimihetsika zombie tsara indrindra vita. Notarihin'i Yeon Sang-ho. Mifantoka indrindra amin'ny vondron'olona vitsivitsy eny ambonin'ny fiaran-dalamby izy ireo satria terena hitandrina ny elanelam-panahin'izy ireo mba hitazomana ny tenany sy ny olon-tiany ho velona sy ho velona.
Ilay horonantsary dia namaky firaketana boaty be dia be tao Korea Atsimo sy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ary niteraka ny tohin'ny taona 2020 ihany koa.
50. alina hariva (2019)
Ity sarimihetsika ity dia nosoratan'i Mindy Kaling. Niara-nilalao tamin'ity sarimihetsika ity koa izy izay raha ny marina dia momba ny mpampiantrano fahitalavitra efa alina be izao izay ny karama farany indrindra amin'ny ekipa mpanoratra ny fandaharana dia manomboka rojom-borona zavatra tsy mahazatra izay misy fiatraikany amin'ny asany. Voatendry ho an'ny Golden Globe Award koa i Emma Thompson ho an'ny fampisehoana mahatalanjona toy izany. Raha milalao ilay vehivavy Indiana-Amerikana i Kaling izay noterena hitety ny tontolon'ny lahy amin'ny hatsikana amin'ny alina.
Ireto ny lisitry ny sarimihetsika tsara indrindra 50 nosoratanay etsy ambony izay azonao jerena ao amin'ny Prime Video. Tsy mila mandeha ianao ary mitady any amin'izay toerana tokony hijerenao ny sarimihetsika satria sarimihetsika mahavariana ireto. Manantena aho fa mankafy azy.
Mouse COD tsara indrindra ho an'ny ady maoderina (2020)
tsy misy fisoratana anarana tranokala
chromecast com fananganana windows 10
sarimihetsika amin'ny fijerena teatra an-tserasera
youtube to mp3 audio converter download
windows emulator android 10 tsara indrindra
mijery horonan-tsary amin'ny fahitalavitra maimaim-poana amin'ny Internet